အလှအပရေးရာ နှငျ့ ရောဂါ မြားစှာအတှကျ ထူးခွားလှတဲ့ ရဲယိုသီးအစှမျး - Tameelay
အလှအပရေးရာ နှငျ့ ရောဂါ မြားစှာအတှကျ ထူးခွားလှတဲ့ ရဲယိုသီးအစှမျး
May 26, 2020 by daddy
မေး# ရဲယိုကဆေးလား ?
ဖွေ€ ရဲယိုသညျဆေးမဟုတျပါ။ ဆေးထကျအဆငျ့မြားစှာမွငျ့မားပွီး သဘာဝအလကေ့ပြေါကျ ရောကျသောအသီးတမြိုးပါ ။
မေး#ရဲယိုသီးကိုဘာရောဂါမှမဖွဈသေးခငျ ကွိုတငျစားလို့ရပါသလား ?
ဖွေ € စားလို့ရပါတယျ ။ ထနျးလကျြနဲ့သျော၎င်းငျး ၊ ပြားရညျနဲ့သျော ၎င်းငျး ၊ရောပွီးစားလို့ရပါတယျ။ အစေ့ တှကေိုမစားစခေငျြပါ ၊အူအတကျမှာသှားပိတျနမှောစိုးလို့ပါ ။ အသီးတှကေမ်ဘာပျေါမှာ အမြားကွီးပါ ။အဲ့အထဲကမှရဲယို သီးကိုရှေးခယျြပွီးထုတျလုပျရသလဲဆိုတော့ ရဲယိုက ကငျဆာပြောကျတဲ့ထိပျတနျးအသီး ၃၀၀ ထဲမှာ ရဲယိုသီးကTOP TEN ထဲမှာပါလို့ရှေးခယျြလိုကျပါတယျ ။
မေး # ရဲယိုသီးအမှညျ့ကိုဘယျ အခြိနျမြိုးမှာ စားသုံးသငျ့ပါသလဲ?
ဖွေ € အစာအိမျထဲမှာအစာမရှိ ခြိနျတှငျစားသငျ့ပါတယျ ။ ပွီးရငျရမြေားမြားလိုကျသောကျ သငျ့ပါတယျ ။တနကေို့ ၃ ကွိမျ စားပေးရငျပိုကောငျးပါတယျ။
ယနခေ့တျေက ဓာတုဗဒေ ပစ်စညျးတှေ အရမျးလှမျးမိုးနလေို့ လူ့သှေးထဲမှာ ဓာတုပစ်စညျးတှေ နစေ့ဉျဝငျရောကျနလေို့ပါ ။ ရဲယိုသီးအမှညျ့ကိုစားပွီးရငျအနညျးဆုံး နာရီဝကျ (သို့ ) တဈနာရီနပွေီးမှအစာစားသငျ့ပါတယျ ။ ကျောဖီ လကျဖကျရညျ ကြှဲရိုငျး ကိုကာကိုလာ တှကေိုရဲယိုသီးနှငျ့ကပျပွီးမစားသငျ့ပါ ။ရဲယိုအာနိသငျ ကမြှာစိုးလို့ပါ ။မတညျ့တဲ့သဘောတော့မရှိပါဘူး ။
မေး # ဘယျလိုရောဂါတှအေတှကျ သငျ့တျောပါသလဲ?
ဖွေ € ရောဂါ ၁၀၁ မြိုးအတှကျ သငျ့တျောပါတယျ ။ ကငျဆာ ၊ ဆီးခြို သှေးတိုး ၊ လဖွေတျခွငျး ၊ လေးဘကျနာ /ဂေါကျ ထိပျကပျနာ/နှာခေါငျးအနံ့မရခွငျး ၊ နားအကွားအာရုံကဆြငျးခွငျး၊ ကြီးပေါငျး/အရိုးပှခွငျး ၊ သားအိမျအလုံးတညျခွငျး၊ သားဥအိမျရအေိတျတညျခွငျး ၊အဖွူဆငျးခွငျး ၊ရယေုနျ ကွှကျနို့ပေါကျခွငျး ၊ပနျးသေ/ပနျးညှိုးခွငျး ၊ဆေးလိပျစှဲကှမျးစှဲအရကျဘီယာ စှဲခွငျး ၊ဖွတျလိုသူမြားသောကျသငျ့ပါသညျ ။
မှုးယဈဆေးဝါးစှဲခွငျး ၊အိပျဆေးစှဲခွငျး ၊ အိပျမပြျောခွငျး ၊ စောစောအိပျရာမဝငျနိုငျခွငျး ၊သညျးခွအေိတျကြောကျတညျ ၊ကြောကျကပျကြောကျတညျခွငျး၊အသညျးအဆီဖုံးခွငျး ၊ပါးစပျပကျြခွငျး ၊ထိပျပွောငျသူမြားဆံပငျပွနျပေါကျခွငျး ၊အသားအရစေိုပွခြေောမှခွေ့ငျး၊ပါးစပျနံခွငျး၊ခြိုငျးနံခွငျး ၊ ရာသီမမှနျခွငျး၊ရာသီလာခါနီး
လူသတျခငျြစိတျပျေါခွငျး ၊ စိတျတိုလှယျခွငျး ၊အထီးကနျြဆနျခွငျး စိတျဓာတျကလြှယျခွငျး ၊အမြားနှငျ့လိုကျလြောညီထှမေနနေိုငျခွငျး ၊တခုခုဆို မှတျမရခွငျး၊
နှလုံးရောဂါ ၊အသညျးရောဂါ ၊ ကြောကျကပျရောဂါ ၊မုနျ့ခြိုအိတျရောဂါ ၊ အစာအိမျနှငျ့အူလမျးကွောငျး ရောဂါမြား ၊ ဆီးကြိတျရောဂါ ၊မွုံခွငျး ၊မှတျဉာဏျမကောငျးခွငျး ၊စာကကျြသညျ့အခါ အာရုံမရခွငျး၊ဆိုးသှမျးလူငယျဖွဈနခွေငျး ၊သူငယျပွနျခွငျး ၊အယျလျဆိုငျးမားရောဂါ ၊အဝလှနျခွငျး ၊သကျလုံကောငျးလိုသူမြား ၊ကိုယျခံအားကောငျးလိုသူမြား ၊အသကျရှညျကနျြးမာလိုသူမြားနစေ့ဉျမှနျမှနျ သောကျသုံးသငျ့ပါသညျ ။
ဒေါကျတာ အောငျစိုးဝငျး ( သဘာဝ စှမျးအားရဲယို ဆရာဝနျ )
မေး# ရဲယိုကဆေးလား ?
ဖြေ€ ရဲယိုသည်ဆေးမဟုတ်ပါ။ ဆေးထက်အဆင့်များစွာမြင့်မားပြီး သဘာဝအလေ့ကျပေါက် ရောက်သောအသီးတမျိုးပါ ။
မေး#ရဲယိုသီးကိုဘာရောဂါမှမဖြစ်သေးခင် ကြိုတင်စားလို့ရပါသလား ?
ဖြေ € စားလို့ရပါတယ် ။ ထန်းလျက်နဲ့သော်၎င်း ၊ ပျားရည်နဲ့သော် ၄င်း ၊ရောပြီးစားလို့ရပါတယ်။ အစေ့ တွေကိုမစားစေချင်ပါ ၊အူအတက်မှာသွားပိတ်နေမှာစိုးလို့ပါ ။ အသီးတွေကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီးပါ ။အဲ့အထဲကမှရဲယို သီးကိုရွေးချယ်ပြီးထုတ်လုပ်ရသလဲဆိုတော့ ရဲယိုက ကင်ဆာပျောက်တဲ့ထိပ်တန်းအသီး ၃၀၀ ထဲမှာ ရဲယိုသီးကTOP TEN ထဲမှာပါလို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ။
မေး # ရဲယိုသီးအမှည့်ကိုဘယ် အချိန်မျိုးမှာ စားသုံးသင့်ပါသလဲ?
ဖြေ € အစာအိမ်ထဲမှာအစာမရှိ ချိန်တွင်စားသင့်ပါတယ် ။ ပြီးရင်ရေများများလိုက်သောက် သင့်ပါတယ် ။တနေ့ကို ၃ ကြိမ် စားပေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်က ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းတွေ အရမ်းလွှမ်းမိုးနေလို့ လူ့သွေးထဲမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေ နေ့စဉ်ဝင်ရောက်နေလို့ပါ ။ ရဲယိုသီးအမှည့်ကိုစားပြီးရင်အနည်းဆုံး နာရီဝက် (သို့ ) တစ်နာရီနေပြီးမှအစာစားသင့်ပါတယ် ။ ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည် ကျွဲရိုင်း ကိုကာကိုလာ တွေကိုရဲယိုသီးနှင့်ကပ်ပြီးမစားသင့်ပါ ။ရဲယိုအာနိသင် ကျမှာစိုးလို့ပါ ။မတည့်တဲ့သဘောတော့မရှိပါဘူး ။
မေး # ဘယ်လိုရောဂါတွေအတွက် သင့်တော်ပါသလဲ?
ဖြေ € ရောဂါ ၁၀၁ မျိုးအတွက် သင့်တော်ပါတယ် ။ ကင်ဆာ ၊ ဆီးချို သွေးတိုး ၊ လေဖြတ်ခြင်း ၊ လေးဘက်နာ /ဂေါက် ထိပ်ကပ်နာ/နှာခေါင်းအနံ့မရခြင်း ၊ နားအကြားအာရုံကျဆင်းခြင်း၊ ကျီးပေါင်း/အရိုးပွခြင်း ၊ သားအိမ်အလုံးတည်ခြင်း၊ သားဥအိမ်ရေအိတ်တည်ခြင်း ၊အဖြူဆင်းခြင်း ၊ရေယုန် ကြွက်နို့ပေါက်ခြင်း ၊ပန်းသေ/ပန်းညှုိုးခြင်း ၊ဆေးလိပ်စွဲကွမ်းစွဲအရက်ဘီယာ စွဲခြင်း ၊ဖြတ်လိုသူများသောက်သင့်ပါသည် ။
မှုးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း ၊အိပ်ဆေးစွဲခြင်း ၊ အိပ်မပျော်ခြင်း ၊ စောစောအိပ်ရာမဝင်နိုင်ခြင်း ၊သည်းခြေအိတ်ကျောက်တည် ၊ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း၊အသည်းအဆီဖုံးခြင်း ၊ပါးစပ်ပျက်ခြင်း ၊ထိပ်ပြောင်သူများဆံပင်ပြန်ပေါက်ခြင်း ၊အသားအရေစိုပြေချောမွေ့ခြင်း၊ပါးစပ်နံခြင်း၊ချိုင်းနံခြင်း ၊ ရာသီမမှန်ခြင်း၊ရာသီလာခါနီး
လူသတ်ချင်စိတ်ပေါ်ခြင်း ၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း ၊အထီးကျန်ဆန်ခြင်း စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်ခြင်း ၊အများနှင့်လိုက်လျောညီထွေမနေနိုင်ခြင်း ၊တခုခုဆို မှတ်မရခြင်း၊
နှလုံးရောဂါ ၊အသည်းရောဂါ ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ၊မုန့်ချိုအိတ်ရောဂါ ၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း ရောဂါများ ၊ ဆီးကျိတ်ရောဂါ ၊မြုံခြင်း ၊မှတ်ဥာဏ်မကောင်းခြင်း ၊စာကျက်သည့်အခါ အာရုံမရခြင်း၊ဆိုးသွမ်းလူငယ်ဖြစ်နေခြင်း ၊သူငယ်ပြန်ခြင်း ၊အယ်လ်ဆိုင်းမားရောဂါ ၊အဝလွန်ခြင်း ၊သက်လုံကောင်းလိုသူများ ၊ကိုယ်ခံအားကောင်းလိုသူများ ၊အသက်ရှည်ကျန်းမာလိုသူများနေ့စဉ်မှန်မှန် သောက်သုံးသင့်ပါသည် ။
ဒေါက်တာ အောင်စိုးဝင်း ( သဘာဝ စွမ်းအားရဲယို ဆရာဝန် )
Categories General Knowledge Tags 26 Post navigation
နပွေငျးပွငျးမှာ သှေးတိုးပွီးခေါငျးမူးလာပါက ခကျြခွငျးသကျသာစမေယျ့ နညျးလမျးမြား ..